Umsebenzi katata wakho uninyanzela ukuba nifuduke.
Oyena mhlobo wakho omthandayo ufudukela kude.
Umntwana wakowenu omdala kunawe uyemka ekhaya kuba etshata.
Ungakwazi kangakanani wena ukuziqhelanisa notshintsho olufana nolu?
Umthi okwaziyo ukuya kwelo cala umoya uvuthuzela kulo unokungophuki. Njengalo mthi nawe unokuba bhetyebhetye xa kusenzeka utshintsho ongenakwenza nto ngalo. Ngaphambi kokuba sithethe ngeendlela zokukwenza oku, makhe siqwalasele izinto ezimbalwa omele uzazi ngotshintsho.
Asinakulubaleka utshintsho. Inyaniso ethethwa yiBhayibhile ngabantu yile: “Bonke behlelwa lixesha nasisihlo esingenakubonwa kwangaphambili.” (INtshumayeli 9:11) Nokuba kunini, uza kuzibonela isenzeka le nto nakuwe. Kakade ke, alusoloko lulubi utshintsho olungalindelekanga. Olunye olusenokubonakala lulubi ekuqaleni, lusenokuba luncedo. Abantu abaninzi bayakuthanda ukuqhelana nendlela ethile yokwenza izinto, ngoko utshintsho—enoba luhle okanye lubi—lubenza bakhe babhideke.
Utshintsho lubenza babe nestres abantu abasebatsha. Ngoba? UAlex * uthi: “Sele uxakene nokutshintsha kweemvakalelo zakho, ngoko olunye utshintsho longeza nje istres.”
Nasi esinye isizathu: Xa utshintsho lusenzeka kubantu abadala, baphakula kumava abo, babone indlela abaye bamelana ngayo nalo ngaphambili. Kodwa bona abantu abasebatsha abanawo loo mava.
Unokufunda ukuqhelana notshintsho. Ukuba bhetyebhetye kukukwazi ukumelana nento embi ekwehleleyo okanye ukuqhelana notshintsho. Umntu onjalo akapheleli nje ekukwazini ukunyamezela utshintsho kodwa uyakwazi nokubona izinto ezintle kulo. Abantu abasebatsha ababhetyebhetye abafane babalekele kwiziyobisi nasetywaleni xa besonganyelwa ziingxaki.
Yamkele imeko. Ngokuqinisekileyo unqwenela ukuba izinto zenzeke ngale ndlela ufuna ngayo, kodwa ke ayinakwenzeka loo nto. Abahlobo baza kufuduka okanye batshate; abantwana bakowenu baza kuba badala baze bemke ekhaya; iimeko zisenokunyanzela ukuba nifuduke kowenu, ushiye abahlobo bakho nayo yonke into osele uyiqhelile. Kungcono uvele uyamkele imeko kunokuba ube ucingana nokuba buhlungu kwayo.—Umgaqo weBhayibhile: INtshumayeli 7:10.
Cinga ngekamva. Ukusoloko ucinga ngezinto ezigqithileyo kufana nokuqhuba imoto kuhola wendlela ujonge esipilini esikubonisa ngasemva. Kuhle kona ukumane usithi krwaqu, kodwa kufuneka ujonge phambili. Kufuneka senze okufanayo naxa kusenzeka utshintsho. Zama ukuhlala ucinga ngekamva. (IMizekeliso 4:25) Ngokomzekelo, yintoni onokuzimisela ukuyenza kule nyanga izayo, okanye kwezintandathu?
Cinga ngezinto ezintle. ULaura olibhinqa eliselula uthi, “Ukuba bhetyebhetye kuxhomekeke kwindlela ozijonga ngayo izinto. Khangela izinto ezintle kuloo ngxaki ukuyo.” Akukho nto intle onokuyifumana kolo tshintsho?—Umgaqo weBhayibhile: INtshumayeli 6:9.
UVictoria olibhinqa eliselula ukhumbula ukuba xa wayefikisa, zonke iitshomi zakhe zemka. Uthi: “Ndandinesithukuthezi, yaye ndandinqwenela ukuba izinto zingabuyela kwisiqhelo. Kodwa xa ndicinga ngaloo nto ngoku, ndiyabona ukuba ndaqalisa ngoko ukukhula. Ndafunda ukuba ukukhula kuhamba notshintsho. Ndatsho ndabona nabanye abantu abanokuba ziitshomi zam.”—Umgaqo weBhayibhile: IMizekeliso 27:10.
Ukuhlala ucingana nezinto ezigqithileyo kufana nokuqhuba imoto kuhola wendlela ujonge esipilini esikubonisa ngemva
Nceda abanye. IBhayibhile ithi: ‘Nyamekelani, kungekuphela nje izilangazelelo zobuqu, kodwa kwanezilangazelelo zabanye.’ (Filipi 2:4) Eyona nto inokukwenza uzive bhetele, kukunceda abanye. UAnna ona-17 uthi: “Ukukhula kwam ndaye ndabona ukuba xa ndinceda abanye abanengxaki efana neyam—okanye engaphezulu—ndiziva bhetele!”
^ isiqe. 11 Amanye amagama akweli nqaku atshintshiwe.
“Musa ukuthi: ‘Kutheni le nto imihla yangaphambili ibilunge ngakumbi kunale?’”—INtshumayeli 7:10.
“Kulunge ngakumbi ukubona ngamehlo kunokuhambahamba komphefumlo.”—INtshumayeli 6:9.
“Ulunge ngakumbi ummelwane okufuphi kunomzalwana okude.” —IMizekeliso 27:10.
“Abantu abasebatsha banokufunda ukuba bhetyebhetye ngokuhlolisisa imeko leyo bakuyo baze baqonde ukuba utshintsho yinto eyenzekayo ebomini. Xa umntu ekhawuleza ayamkele imeko, kuba lula ukuqhubeka nobomi. Kuye kude kube bhetele.”
“Xa ide yagqitha ingxaki, andibe ndicingana nayo. Ndiye ndijongane nelandelayo. Ndicinga ukuba, ukuba bhetyebhetye kuquka ukujonga phambili kungekhona ngemva.”